Isbedelka Cimilada ayaa dili kara NASA | Saadaasha Shabakadda
Isbedelka cimilada ayaa dili kara NASA
NASA waxay halis ugu jirtaa inay baaba'do sababo la xiriira saameynta isbeddelka cimilada, sida lagu sharraxay websaydhka Hay'adda. Kordhinta heerka badda, iyo sidoo kale kororka xoogga iyo soo noqnoqoshada duufaannada kulaylaha, waxay ku dambayn kartaa inay burburiso Xarunta John F. Kennedy Space Center ee Cape Canaveral (Florida), iyo sidoo kale inta badan furitaanka iyo dhismooyinka halkaas oo ay ku tababaraan cirbixiyeenno.
Iyagoo ku dhow xeebta Badweynta Atlantik, waxay u baahan yihiin inay hubiyaan nabadgelyada degsiimooyinka magaalooyinka ee gobolka, sidaa darteed waxay rajeynayaan inay ka fogaadaan daadadka suurtagalka ah iyaga oo dhisaya biyo xireen, una raraya qaar ka mid ah taangiyada iyo shaybaarada badda.
Weli, cawaaqib xumada kululaaneysa adduunka ayaa marba marka ka dambeysa sii qarsoon. Tusaale waxaa u ah sida dhakhsaha badan ee heerka badda kor ugu kacay sannadihii la soo dhaafay. Sida aad ku arkeyso sawirka, laga soo bilaabo 1880 illaa iyo hadda wuu kacay 20 sentimitir, oo isbeddelku uma muuqdo inuu isbeddelayo sannadaha soo socda, maaddaama heer-kulku sii kordhayo, markay sidaas yeelaanna, barafka qotoma ayaa dhalaalaya, taas oo keenaysa in biyaha badda kor u kacaan.
Iyo, dabcan, waxa dhibaato ku ah dunida sidoo kale waxay dhibaato ku tahay NASA. Duufaanada kuleylaha, iyo sidoo kale duufaannada, waxay sababaan dhowr waxyeelo Xarumaheeda, sidaa darteed injineerada Xarunta John F. Kennedy Space Center waxay diyaariyeen taxane ciid ah iyo dhir doog ah si looga ilaaliyo hirarka sare. Laakiin tani maahan xal joogto ah: dadka xeebta ku nooli waa sii kordhayaan, sida ay yeelataana dhulku wuu daciifayaaMarka waa inay abuuraan qorshooyin waqti dheer ah.
Akhriso daraasadda ay diyaarisay NASA, riix halkan (Waxay ku qoran tahay Ingiriis).
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Isbedelka cimilada ayaa dili kara NASA